सोधिने प्रश्न - Jinghui पर्यावरण प्रौद्योगिकी लिमिटेड कं,
व्यावसायिक एयर कूलर
आधार स्टेशन शीतल
evaporative हावा कूलर खरीद बारे सुझाव:
: 1, को उपस्थिति जाँच
, उच्च सटीक मोल्ड प्रयोग उत्पादन अधिक चिल्लो र सुन्दर पनि उपस्थिति छ।
2, प्रक्रिया प्रवाह जाँच गर्नुहोस्:
तपाईं उत्पादन खरिद गर्दा, तपाईं राम्रो स्थापित र कस जडित ठाउँहरू, को स्क्रू, को पुस-बटन र अन्य घटक संयोजन सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
3, घटकहरुलाई जाँच गर्नुहोस्:
सारा सेट विभिन्न भागहरु र घटक द्वारा भेला छ। ती घटक गुणस्तर सीधा कूलर सेवामा जीवन र ठंडा प्रभाव असर गर्न सक्छ। तसर्थ, प्रमुख घटक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम हो जाँच गर्नुहोस्। Evaporative हावा कूलर को प्रमुख घटक समावेश: मुख्य नियन्त्रण बक्स, पानी पम्प, वाल्व, मोटर, ब्लोअर सकिन।
evaporative हावा कूलर को आवेदन
1, Crowed क्षेत्र वा छोटो समयमा तीव्र गतिमा ठंडा गर्न आवश्यक जो क्षेत्र
जस्तै स्कूल, भान्सा, जिम, कारखाना, चर्च, बजार, प्रदर्शनी हल, सम्मेलन कोठा।
2, उच्च तापमान ताप उपकरण उत्पादन साइटहरु
Mounding इंजेक्शन, विद्युत, धातु, मुद्रण को कार्यशाला जस्तै, ग्लास, मशीनिंग, खाद्य पदार्थ प्रशोधन र घरेलू बिजुली उद्योग
3, जो गंध, धूलो भरिएको क्षेत्र, प्रदूषित हावा
जस्तै होटल भान्सा, अस्पताल हल, प्लास्टिक उद्योग, रासायनिक उद्योग, छाला उद्योग, रबर उद्योग, मुद्रण र रंगाई उद्योग, कपडा उद्योग, खेत आदि
4, ठूलो खुला क्षेत्रमा
सपिङ्ग मल, सुपरमार्केट, मनोरञ्जन, मनोरञ्जन केन्द्र, प्रतीक्षालय आदि जस्तै
5, ग्रीनहाउस र कृषि वैज्ञानिक अनुसन्धान आधार
1, Evaporative हावा कूलर हावा गुणस्तर सुधार वेंटिलेशन, ठंडा, humidification लागि प्रयोग छ। अन्य प्रयोगको लागि, pls को झा ईन्जिनियरहरु परामर्श वा अग्रिम बेच्छ।
2, निम्न अवस्थामा हावा कूलर प्रयोग यसको जीवन वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ:
क) सुख्खा-बल्ब तापमान: 20 ℃ -50 ℃
ख) सापेक्ष चिस्यान: ≤85%
ग) दबाव: 86Kpa-106Kpa
घ) निश्चित सफा पानी प्रयोग गरिन्छ कि हुनुहोस् र यसको तापमान 45 भन्दा कम ℃ हुनुपर्छ, आपूर्ति दबाव बारेमा 0.15-1Mpa छ;
ई) आपूर्ति भोल्टेज छैन अधिक गर्न सकिन्छ दर भोल्टेज को ± 15%
च) कुनै संक्षारक ग्याँस क्षेत्र
3, कूलर को बाहिरी खोल र प्याकेज पूर्ण लौ retardant सामाग्री गरेको छैन। यो आगो को कुनै पनि स्रोतबाट रोक्न निश्चित हुनुहोस्।
4, रिसाव देखि क्षति को मामला मा, नाली वाल्व र उपखाडी वाल्व सही हावा कूलर प्रयोग गर्नु अघि जडान जडान निश्चित गर्नुहोस्।
5, डिस्चार्ज संलग्न स्थान मा हावा cooled जोगिन त्यहाँ भने, तपाईं विन्डो खोल्न वा प्राकृतिक निकास र यांत्रिक निकास संयुक्त बनाउन anther अन्य cooing मिसिन स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, अनुप्रयोग ठाउँमा पर्याप्त निकास मात्रा हुनुपर्छ।
6, को कूलर मर्मत गर्न आवश्यक छ, यो शक्ति आपूर्ति काट्नु र "मर्मतका र कुनै प्रयोग" भन्दै चेतावनी चिन्ह राख्न आवश्यक छ।
7, को कूलर सेट यात्राहरु, मद्दत को लागि सेवा कल गर्दा र आफै सुरक्षा स्विच परिवर्तन छैन।
8, कृपया छैन बारम्बार सक्रिय र कूलर बन्द
9, निरंतर तापमान र चिस्यान ठाँउ लागि जाँदा, pls यसलाई ठंडा को विशेषज्ञ को दर को पुस्तिका अन्तर्गत प्रयोग हावा चिस्यान गर्न inversely समानुपातिक छ।
1, स्वच्छ ठंडा प्याड
को कूलर देखि प्याड हटाउने, र त्यसपछि द्वारा ट्याप पानी यसलाई सफा
2, गन्ध हटाउने
यो सुन्दर गर्न सुरु गर्दा निम्न अवस्थामा केही मिनेट केही गन्ध सक्छ:
1) वर्षा पछि कूलर प्रयोग
2) तपाईंले प्रयोग पछि ट्यांक सफा छैन भने माथि, हावा केही हुन सक्छ cooled जब तपाईं यसलाई प्रयोग अर्को समय गंध। (सफा समारोह बन्द गरियो बन्द)
3) लामो समय प्रयोग पछि मा समय कूलर सफा नगर्नुहोस्। (स्वतः सफा समारोह बन्द गरियो)
4) अन्य अवस्थामा।
सामान्यतया यो गन्ध रोक्न गर्न बन्द सफा समारोह अन गर्न सिफारिस गरिएको छ।
पटक मा ठंडा पैड सफा अपेक्षा, तपाईं पनि पानी ट्यांकी गर्न क्लोरीन डाइअक्साइड निस्संक्रामक थप्न सक्नुहुन्छ।
3, मर्मतसम्भारको कसरी कूलर तपाईं एक समय को लागि यो प्रयोग गर्दा गर्छन्?
जाडो वा तपाईं एक समय को लागि कूलर प्रयोग गर्छन् जब, कृपया निम्न के:
पहिलो, पानी वाल्व पूर्ण सफाई गर्न, एकै समयमा, बन्द र ठंडा प्याड हटाउन माथि देखाइएको रूपमा ट्यांक र सफा खाली यसलाई। परमिट भने, यो एक defection छ राम्रो छ। सफाई पछि, ठंडा प्याड स्थापना र प्याड सुक्खामा58 मिनेट काम गर्ने कूलर, र अन्तिम मा तल बिजुली आपूर्ति बन्द। यसलाई बाहिर धूलो रोक्न हुड सुरक्षा कवर राम्रो हुनेछ।
4, सञ्चालन अघि जाँच गर्नुहोस्: को अस्थायी बल वाल्व राम्रो काम छ? नियन्त्रण रेखा सही निश्चित हुनुहुन्छ? तेल असर यदि यो अपकेंद्र प्रकार छ। एक समय को लागि सञ्चालन पछि ठंडा पैड जाँच गर्नुहोस्। अन्य सामान्य कार्यहरु जाँच गर्नुहोस्।
5, Evaporative हावा कूलर ऊर्जा बचत उपकरण एक प्रकारको छ र यो मात्र केही मर्मतका आवश्यक छ। तर मिसिन बाहिर स्थापित छ रूपमा, एक राम्रो ठंडा प्रभाव, यसको प्रयोग गरेर लामो समय पछि तपाईंले केही सफाई गर्न को लागि राम्रो छ।
त्रुटि कोड दोष लक्षण समाधान
E1 हावा कूलर गर्न विद्युत आपूर्ति भन्दा-वर्तमान छ कृपया शक्ति तोड्ने र बिजुली आपूर्ति जाँच
E2 हावा कूलर गर्न भोल्टेज आपूर्ति भन्दा-भोल्टेज छ कृपया शक्ति तोड्ने र बिजुली आपूर्ति जाँच
E3 हावा कूलर गर्न भोल्टेज आपूर्ति अन्तर्गत-भोल्टेज छ कृपया शक्ति तोड्ने र बिजुली आपूर्ति जाँच
E4 मोटर तातो छ कृपया शक्ति तोड्ने र बिजुली आपूर्ति जाँच
गर्ने ठंडा पैड जाँच
ढोका पर्याप्त वेंटिलेशन लागि खोलिएको गरिरहे
E8 पर्खाल नियन्त्रक हावा कूलर देखि संकेत प्राप्त गर्न सक्दैन संचार इन्टरफेस मा राम्रो जडान ध्यान
E9 पानी आपूर्ति कार्य 15mins भित्र समाप्त गर्न सकिन्छ को उपखाडी वाल्व जाँच
साधारण समस्याहरू र सुझाव उपचार
समस्या: ठंडा पैड को भाग भिजेको छैन
(1) पानी वितरक अवरुद्ध छ, यो सफा गर्नुहोस्।
(2) पानी ट्यांकी बाङ्गो, कृपया यो स्तरमा समायोजन छ।
(3) कम पानी।
समस्या: रन पम्प, तर पानी circulates, वा पैड पानी कमी छ।
(1) पानी वितरक अवरुद्ध छ, कृपया सफा।
(2) पम्प strainer अवरुद्ध
समस्या: ठंडा प्रतिमा नियन्त्रक मा चमकता
(1) कम पानी चेतावनी, पानी उपखाडी वाल्व रोकावट वा पानी स्रोत स्टप आपूर्ति पानी जाँच गर्नुहोस्।
(2) यो अझै पनि पानी पर्याप्त हुँदा चमकता छ भने, पानी स्तर जांच जाँच गर्नुहोस्।
(3) पम्प strainer अवरुद्ध
समस्या: जल रिसाव
(1) पानी आपूर्ति पाइप देखि रिसाव: लचीला-नली वृद्ध छ वा भङ्ग र पानी leakages यसलाई देखि। कृपया नयाँ लचिलो-नली परिवर्तन।
(2) नाली वाल्व देखि रिसाव: पानी स्तर पनि उच्च छ। कृपया पानी उपखाडी वाल्व समायोजन गर्नुहोस्।
(3) पक्ष प्यानल देखि रिसाव: पैड शीतलक अवरुद्ध छन्, कृपया यसलाई सफा।
समस्या: नियन्त्रक प्रदर्शन गर्न सक्छन्
(1) विद्युत कनेक्शन जाँच गर्नुहोस्। विद्युत सुरक्षा उपकरण काम गरिरहेको छ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्।
(2) कृपया जाँच पृथ्वी तार सही जोडिएको छ। चरण लाइनहरू जडान गरिएका निश्चित गर्नुहोस्। फ्यूज भङ्ग यदि जाँच गर्नुहोस्।
(3) कस जोडिएको संकेत लाइन जाँच गर्नुहोस्।
समस्या: 3PH कूलर काम गर्न, एक बज को मोटर ल्याउन असफल।
(1) पावर चरण, अभाव यो बिजुली आपूर्ति जाँच गर्न आवश्यक छ।
(2) मोटर जाँच र बिजुली पीसीबी बोर्ड गरिब सम्पर्क छ वा छैन।
सम्भावित कारण फेला गर्न कठिन छ भने, तपाईं यसलाई विधि, तुलना विधि, को cameral विधि वा अन्य विधिहरू प्रतिस्थापन गरेर बाहिर आंकडा गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा, तपाईं पनि स्थानीय वितरक सोध्न वा मद्दत लागि बेच्छ गर्न सक्नुहुन्छ।
कम्पनी: फुजियान Jinghui पर्यावरण प्रौद्योगिकी लिमिटेड कं।
ठेगाना: Wushan रोड No.3, Gaishan टाउन, Cangshan जिल्ला, फूजौ शहर, फुजियान प्रांत, चीन